Wararka - Arenti wuxuu ku dhawaaqay Visiotech inuu yahay Qaybiyaha Gobolka
Arenti wuxuu ku dhawaaqay Visiotech inuu yahay Qaybiyaha Gobolka
Hangzhou - Maajo 19, 2021 - Arenti, oo ah hormuudka bixiyaha kaameeraha amniga guriga ee IoT smart, ayaa maanta ku dhawaaqay iskaashi ay la leedahay Visiotech oo ah qaybiyaha loogu talagalay Naqshadeynta Red Dot 2021 iyo iF Design 2021 oo la siiyay Arenti Smart Home Security Camera.
Wadashaqaynta cusub waxay calaamad u tahay horumarka ganacsi ee Arenti ee taxanaha Arenti Optics-ka ugu sarreeya suuqa Galbeedka Yurub.
Visiotech waa hormuudka qaybiyaha Yurub ee CCTV iyo alaabada amniga caqliga leh oo leh khibrad iyo khibrad sanado badan leh. Jose, Maareeyaha Badeecadda ee CCTV/Audio/SmartHome ee Visiotech, ayaa yiri, “Markii aan aragnay naqshadda gaarka ah ee Taxanaha Arenti Optics, aad baan ula dhacnay oo waxaan isla markiiba dalbannay baarka. Annaguna aad baan ugu qanacnay waxqabadka weyn iyo tayada ka dib markii aan tijaabinay badeecadaha, sidaa darteed waxaan go'aansannay inaan qaybinno kamaradaha Taxanaha Optics-ka ee Arenti oo aan amarka koowaad siinnay. Waxaa si rasmi ah naloogu magacaabay qaybiyaha tooska ah iyo soo dejiyaha kamaradaha Taxanaha Arenti Optics tan iyo May, 2021. Aad ayaan ugu faraxsanahay iskaashiga waxaanan kalsooni buuxda ku qabnaa xalka aan wada bixin karno Arenti. ”
Iskaashiga tooska ah ee Visiotech waxaa la hirgelin doonaa laga bilaabo May 19, 2021.
Ku saabsan Arenti
Arenti waxay higsaneysaa inay siiso adeegsadayaasha adduunka si sahlan, aamin ah, oo xariif ah alaabada amniga guriga & xalalka leh isku-darka ugu fiican ee naqshadeynta goynta, qiimaha la awoodi karo, tikniyoolajiyadda horumarsan & shaqooyinka saaxiibtinimada leh.
Teknolojiyadda Arenti waa koox hormuud u ah AIoT oo diiradda saareysa sidii loo keeni lahaa alaabada amniga guriga ee ka nabdoon, fudud, ka caqli badan dadka isticmaala adduunka. Wuxuu ku dhashay Nederland, Arenti waxaa aasaasay koox khubaro ah oo ka kala socda dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin shirkadda amniga adduunka ugu weyn, shirkadda 500 ee maalka ah ee adduunka, iyo madal guriga ugu horreeya oo caqli badan. Kooxda Arenti ayaa leh khibrad ka badan 30 sano AIoT, amniga & warshadaha guriga caqliga leh.
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo: www.arenti.com.
Ku saabsan Visiotech
Visiotech waa shirkad u heellan soo iibsiga, horumarinta iyo qaybinta teknolojiyadda iyo xalka ilaalada fiidiyowga. Tan iyo markii la aasaasay 2003, Visiotech waxay ku jirtay meel ay macaamiisheeda ugu soo bandhigto alaab tayo sare leh qiimo tartan ah oo si joogto ah ugu jira.
Visiotech waxay leedahay koox ku takhasustay farsamada iyo wakiilada iibinta oo leh khibrad xirfadeed oo ballaaran, si joogto ah u raadineysa horumarkii ugu dambeeyay ee teknolojiyadda ee qeybta ilaalada fiidiyaha, had iyo jeer isku dayaya inay helaan xalalka ugu dambeeyay ee sidoo kale ah kuwa ugu fiican ee macaamiisheena .
Visiotech waxay hadda udub -dhexaad u tahay feejignaanta shaqsiyeed ee macmiil kasta, iyadoo si joogto ah u ballaarineysa liistada alaabada iyadoo loo eegayo baahiyaha gaarka ah ee la kulmay iyo sidoo kale ku daridda waxyaabaha cusub ee farsamada. Ballan -qaadka guud ee macaamiisha iyo raasamaalka aadanaha oo dammaanad -qaadaya dayactirka joogtada ah ee alaabta iyo sidoo kale adeegga la -talinta iibka hore iyo taageerada gadaasha.
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo: www.visiotechsecurity.com.
La xiriir Visiotech
Ku dar: Avenida del Sol 22, 28850, Torrejón de Ardoz (Spain)
Waqtiga dhejinta: 19/05/21